Global Voices teny Malagasy » Vovonàna GV : Tanteraka koa ny andro faharoa ! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Jolay 2008 15:21 GMT 1	 · Mpanoratra Deborah Ann Dilley Nandika Tomavana
Sokajy: Hongria, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Teknolojia, Vaovao Mafana
Raha nifantoka amin'ny fisoloam-bava sy fivoizana  hoan'ny fahafaham-pitenena'ireo mpiblaogy ny Andro voalohan’ ny vovonàna Global Voices , androany kosa dia mifantoka bebe kokoa amin'ny raharaha anatin'ny Global Voices , miaraka amin'ny fampahalalana ireo tetikasa hafa miara-dia aminy dia ny Rising Voices [Fanandratana ny feon'ireo izay tsy re]  sy Lingua [dikateny GV, tafiditra ao ny Malagasy amin'ny alalan'ity vohikala ity] .
Nisokatra tamin'ny fampidirana notanterahin'i Georgia Poppelwell (Tale Jeneralin'ny GV) sy Solana Larsen  (Mpandrindra Jeneralin'ny GV) ny fivoriana, izay nanolorana fisaorana mitafotafo ireo mpanohana mpamatsy ara-bola marobe [sponsors]. David Sasaki  (Rising Voices Outreach) dia nanazava fohy mikasika izay vaovao farany mikasika ny fivoatry ny tetikasa Rising Voices, sady nampiseho lahatsary fohy izay manazava ireo tetikasa mahaleotena izay vatsian'ny Outreach .
Lohahevitra 1 : Manerana izao tontolo izao ny Web 2.0  dia ny namana Lova Rakotomalala  no mpandrindra ny adihevitra, ary nandraisan'i Catalina Restrepo  (HiperBarrio, Colombia), sy Collins Dennis Oduor  (REPACTED, Kenya), sy Cristina Quisbert (Voces Bolivianas, Bolivia), ary Mialy Andriamananjara  (FOKO, Madagascar) anjara fitenenana. Rebecca Wanjiku kosa no nampita mivantana [liveblog] izany . Namoriana ireo sangany amin'ny fivoizana ny Web 2.0 manerana izao tontolo izao avy any Kôlômbia, Kenya, Bôlivia ary Madagasikara izay manana ny fikasana ny hanandratra ny adihevitra iraisam-pirenena ho sahala amin'ny tahan'ny mponina manerana izao tontolo izao [tsy ny vitsy an'isa ihany no hanana anjara fitenenana]. Samy nanazava ireo olana itadiavany vaha-olana sy ireo fahasarotana tsy maintsy natrehiny izy ireo.
Lohahevitra faha-2 : Ny fifidianana ara-Aterineto any amin'ireo firenena izay miroso amin'ny lalan'ny demôkrasia  dia nifantoka amin'ny firongatry ny fi-blaogiana, ny fivelaran'ny serasera ara-tsosialy sy ireo sampan-draharaha madinidinika manodidina ny blaogy [micro-blogging services] tahaky ny Facebook sy Twitter, lahatsary – sy fanapariahana sary – toy ny vohikala YouTube sy Flickr, ary ny fipariahana'ny teknolojiaizay mifatotra amin'ny fampisana ny finday anivon'ny sarambambem-bahoaka izay manolotra fitaovana ahafahany mandray anjara tanteraka amin'ny adihevitra demôkratika. Raha dinihina akaiky ny fiantraikan'ireny fitaovana ireny tamin'ireo fifidianana farany izay nitranga vao tsy ela izay nijoroan'i Daudi Were  (Kenya), sy Onnik Krikorian  (Armenia), sy Hamid Tehrani  (Iran), ary Luis Carlos Díaz  (Venezuela) vavolombelona. Solana Larsen  no nandrindra ny adihevitra raha i Jillian York kosa no nanatanteraka ny fampitana mivantana [liveblog] izany.
Rehefa tafahaona ny samy vilana  no lohahevitra faha-3. izay mifantoka tanteraka amin'izay fanoheran'ireo mponina tany Tibet ny fandalovan'ny afo olaimpika [famoretana ireo mpanohitra, herisetra samihafa], ratsy ny fijerin'izao tontolo izao an'i Shina tamin'ireny zava-nitranga ireny. Inona ary no zavatra azo apetraka mba hamporisihina ny fifanakalozan-kevitra rehefa mafana toy ireny ny fifanolanana? Isaac Mao  (Entrepreneur and Researcher, China), sy Rebecca MacKinnon (University of Hong Kong and Global Voies), sy John Kennedy  (Mpandrindra amin'ny teny Shinoa, Global Voices) no nandray fitenenana ary i Xiao Qiang  kosa no nandrindra ny adihevitra, mba hikatsahana valiny hoan'izany fanontaniana izany. Mbola isaorana koa i Jillian York tamin'ny ny fampitana mivantana [liveblog] izany.
Izay sangany sady sampany miroborobo indrindra anivon'ny GV, ny Lingua, no fototry ny Lohahevitra faha-4 : Dikateny sy Web amin'ny teny samihafa . Ny mpitarika ny Lingua i Portnoy  no nanao ny fampidirana sy nandrindra ny adihevitra izay nandraisan'i Chris Salzberg  (Canada/Japan), sy Paula Góes  (Brazil), sy Rezwan  (Bangladesh), sy Claire Ulrich  (France) anjara fitenenana avy. Samy nanolotra izay fomba ifidianan-dry zareo izay lahatsoratra hadikateny ry zareo, sy ny toerana lehibe izay misy ny fanolorana fiteny samihafa amin'ny fampiroboroboana sy ny fanapariahana ny feon'ny GV, misy koa ny fanazavana manodidina ireo fitaovana fandikan-teny vaovao izay ampiasain'ny ekipa sasantsasany. Ankehitriny dia adika amin'ny fiteny Alemàna , Espanôla , Frantsay , Italiana , Malagasy , Pôrtogey , Albaniana , Makedôniana , Arabo , Farsi , Bangla , Hindy , Shinoa (Notsorinaa) , Shinoa (Nentim-paharazana) , Japaney  ny tetikasa Lingua.
Ny lohaheviztra farany izay nodinihina androany dia Rehefa manongilan-tsofina izao tontolo izao . Preetam Rai  sy Neha Viswanathan  (India) no niaraka nandrindra ny adihevitra, Juliana Rotich  (Kenya), sy Lova Rakotomala  (Madagascar) kosa no nandray fitenenana. Nanolotra fijery hafa avy amin'ireo mpiblaogy “hafa” izy ireo – ireo izay tsy mivoy pôlitika fa mizara kosa momba izay fiainany andavan'andro. Lohahevitra hafa nodinihina koa ny fomba izay amenoan'ny blaogy amin'ny fomba mahatsikaiky ireo banga apetraky ny fanapahankevitr'ireo fampahalalam-baovao “nentim-paharazana” tsy hitatitra mikasika tantara mpiseho andavan'andro, toy ny voina voa-janahary sy ny olana ara-pôlitika. Rebekah Heacock no nikarakara ny fampitana mivantana [liveblog] izany.
Tsy afaka hangina fa ambara etoana fa izao fivoriana izao no tanteraka dia satria nisy ny ezaka goavana izay niarahan'ny maro nanao, tsy ireo mpiandraikitra ny fanatanterahana ny vovonàna ihany (Georgia and Solana) no tolorana fankasitrahana fa ireo mpanohana mpamatsy ara-bola marobe [sponsors]  koa. Tsy adino koa anefa ireo mpiblaogy maro antsitram-po, izay nahafoy fotoana mba handraisana an-tsoratra izay voalaza, sy nampita izany tamin'ny alalan'ny twitter , sy flickr , ary indrindra indrindra ireo ny fampitana mivantana [liveblog] izany (izay tena asa be tokoa !) dia mendrika ny tolorana fisaorana mitafotafo ihany koa. Raha tsy ny fiaraha-monina tsy nahatanteraka izay ilain'ny fiaraha-monina !
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/07/01/1087/
 fisoloam-bava sy fivoizana: https://advocacy.globalvoicesonline.org/
 Andro voalohan’: https://mg.globalvoicesonline.org/2008/06/30/1086/
 vovonàna Global Voices: https://summit08.globalvoicesonline.org/
 Rising Voices [Fanandratana ny feon'ireo izay tsy re]: https://rising.globalvoicesonline.org/
 Lingua [dikateny GV, tafiditra ao ny Malagasy amin'ny alalan'ity vohikala ity]: https://www.globalvoicesonline.org/lingua
 Georgia Poppelwell : https://globalvoicesonline.org/author/georgia-popplewell/
 nampiseho lahatsary fohy izay manazava ireo tetikasa mahaleotena izay vatsian'ny Outreach: https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2008/06/28/rising-voices-trailer/
 Lohahevitra 1 : Manerana izao tontolo izao ny Web 2.0: https://summit08.globalvoicesonline.org/2008/05/20/rising-voices-at-the-global-voices-summit-2008/
 Catalina Restrepo: https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2008/04/17/hiperbarrio-the-social-role-of-libraries/
 Collins Dennis Oduor: http://repacted.org/?page_id=2
 Cristina Quisbert : https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2007/12/07/interview-with-cristina-quisbert-of-voces-bolivianas/
 Rebecca Wanjiku kosa no nampita mivantana [liveblog] izany: https://summit08.globalvoicesonline.org/2008/06/28/day-1-session-1-liveblog-for-%e2%80%9cweb-20-goes-worldwide%e2%80%9d/
 Lohahevitra faha-2 : Ny fifidianana ara-Aterineto any amin'ireo firenena izay miroso amin'ny lalan'ny demôkrasia: https://summit08.globalvoicesonline.org/2008/06/28/day-2-session-2-the-wired-electorate-in-emerging-democracies/
 Solana Larsen: https://www.globalvoicesonline.org/author/solana-larsen/
 Rehefa tafahaona ny samy vilana: https://summit08.globalvoicesonline.org/2008/06/28/day-2-session-3-when-biases-meet-biases/
 Rebecca MacKinnon : http://rconversation.blogs.com/about.html
 Xiao Qiang: http://en.wikipedia.org/wiki/Xiao_Qiang
 Lohahevitra faha-4 : Dikateny sy Web amin'ny teny samihafa: https://summit08.globalvoicesonline.org/2008/06/28/day-2-session-4-translation-and-the-multi-lingual-web/
 Shinoa (Notsorinaa): https://zh.globalvoicesonline.org/hans/
 Shinoa (Nentim-paharazana): https://zh.globalvoicesonline.org/hant/
 Rehefa manongilan-tsofina izao tontolo izao: https://summit08.globalvoicesonline.org/2008/06/28/day-2-session-5-when-the-world-listens/
 ireo mpanohana mpamatsy ara-bola marobe [sponsors]: https://summit08.globalvoicesonline.org/sponsors/